Fandikan-dalàna amin'ny aterneto :: Hamafisina ny fanaraha-maso ny fanaparitahana tsaho • AoRaha
Fandikan-dalàna amin’ny aterneto Hamafisina ny fanaraha-maso ny fanaparitahana tsaho
Niha nahazo vahana tato ho ato ny fampielezana vaovao tsy marina any amin’ireo tambajotran-tserasera. Tsy hipetraka fotsiny ry zareo zandary avy etsy amin’ny sampana misahana ny Fandikan-dalàna amin’ny fitaovan-tserasera fa hanamafy ny fanaraha-maso an’ireo olona mihoa-pefy amin’ny fitaovan-tserasera, araka ny fampitam-baovao nomen’ny kolonely Andrianarisaona Herilalatiana, lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny “Cybercriminalité”, omaly. Nampitandrina sahady izy fa henjana ny sazy miandry an’ireo mpanely tsaho raha tratra.
“Enjehin’ny lalàna 2014-006 ny fanaparitahana vaovao diso, fihantsiana ady, fandrahonana olona, fanasoketana olona tsy mbola namoahan’ny fitsarana didy fanamelohana sy ny sisa. Miankina amin’ny vesatry ny fitoriana ny sazy. Manomboka amin’ny fandoavana onitra roa hatramin’ny zato tapitrisa ariary any amin’ny fanjakana. Samy hafa amin’io vola io mihitsy ny onitra mety hangatahan’ilay mpitory. Mety ho tonga amin’ny fanagadrana roa hatramin’ny dimy taona ny sazy”, hoy izy.
Tsiahivina fa olona roapolo no voatoroka noho ny fandikan-dalàna samihafa tamin’ny fitaovan-tserasera, tamin’iny taon-dasa iny. Hatramin’ny niandohan’ity taona 2020 ity kosa dia olona dimy amby folo, hatreto, no efa nanaovana famotorana.
Fahazoana anaka :: Faly sahirana ilay reny niteraka kambana efatra